Drama Archives - Page 27 of 27 - MoviesFan
Anastasia Steele ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်းဖော်ပြလိုက်တဲ့ ‘Fifty Shades Freed’ ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် Trailer
Universal Pictures က နှစ်သစ်ကို ‘Fifty Shades Freed’ ရဲ့ trailer အသစ်နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ကလွှင့်တင်ခဲ့တဲ့ အဲဒီ trailer ဟာ ပထမထွက်ရှိထားတဲ့ trailer မှာပါတဲ့ပြကွက်တွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုထားပေမယ့် ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံး ၅ စက္ကန့်လောက်မှာ အသစ်စက်စက်ပြကွက်တစ်ခုပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဆရာဝန်က Anastasia Steele ကို “It seems you are pregnant, Mrs. Grey” လို့ပြောလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်.. Fifty Shades Trilogy ရဲ့နောက်ဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ ‘Fifty Shades Freed’ မှာ Anastasia Steele နဲ့ Christian Grey တို့က လက်ထပ်လိုက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ခရီးလမ်းက ထင်ထားသလိုမဖြောင့်ဖြူးပါဘူး။ Ana ရဲ့ သူဌေးဟောင်း Jack Hyde က Ana ကို လိုက်လံနှောင့်ယှက်သလို Christian Grey ရဲ့ အိပ်မက်ဆိုးကြီးဖြစ်တဲ့ Elena ကလည်း တစ်ဖန်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ Christian နဲ့ Ana တို့နှစ်ယောက် ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုလက်တွဲရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fifty Shades Freed ထဲက Christian နဲ့ Ana တို့ရဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်းချစ်ကြိုက်ခန်းတွေကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်နေ့ကျရင် ပိတ်ကားပေါ်မှာကြည့်ရှုခံစားလို့ရတော့မှာဖြစ်လို့ Fifty Shades series ရဲ့ပရိသတ်တွေ အများကြီးစောင့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ? ?
အသက် ၆၅နှစ်ကျော်မင်းသားကြီး Liam Neeson ရဲ့ Fighting တွေကို မြင်တွေ့ရမယ့် THE COMMUTER
Fighting ဇာတ်ကားတွေကိုမှ ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ fighting သမားတွေအတွက် အလန်းစားရုပ်ရှင်ကားတစ်ကား လာပါတော့မယ်။ ဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင်ကတော့ Best Actor ဆုပေါင်းများစွာ သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Liam Neeson ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ အသက် ၆၆နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီးပေါ့။
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ Liam Neeson ဟာ insurance salesman တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်ရထားနဲ့အသွားအပြန်လုပ်တဲ့သူတစ်ဉီးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ လျို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မိန်းမတစ်ယောက်က ဒေါ်လာ $100,000 ပေးပြီးအလုပ်အပ်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှစပြီး အသက် ၆၆ နှစ် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Liam Neeson ရဲ့ဘယ်လို Fighting အကြမ်းစားစွန့်စားခန်းတွေကို မြင်တွေ့ရမလည်းဆိုတာကို တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Action ကားမှကြိုက်တဲ့သူတွေ မကြာခင်ပိတ်ကားပေါ်မှာ အရသာရှိရှိခံစားနိုင်တော့မှာဖြစ်လို့ ရုံတင်မယ့်ရက်ကို နားစွင့်ထားကြဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော်။
Image Source : https://www.facebook.com/TheCommuterUK
action, Drama, fighting
‘Kakegurui – Compulsive Gambler’ Live Action ရဲ့ အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေကို ကြေညာလိုက်ပြီ
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလကတည်းက Kakegurui live action မှာပါဝင်မယ့် သရုပ်ဆောင်တွေကို တစ်ယောက်ချင်းကြေညာလာတာ ဒီနေ့ကြေညာလိုက်တဲ့ Saotome Mary ဇာတ်ကောင်ရဲ့ cast အပြီးမှာတော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ အဓိကသရုပ်ဆောင်သုံးယောက်လုံး ပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိကဇာတ်ဆောင် ဖြစ်တဲ့ Jabami Yumeko ကို Anohana ရုပ်ရှင်ထဲမှာ Menma အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Hamabe Minami ကသရုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Jabami Yumeko ရဲ့ partner ဖြစ်တဲ့ Saotome Mary ဇာတ်ကောင်ကိုတော့ Prison School ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ Midorikawa Hana အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Morikawa Aoi က သရုပ်ဆောင်မှာပါ။ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Suzui Ryouta ကို Takasugi Mahiro ကသရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Jabami Yumeko အဖြစ် Hamabe Minami
Saotome Mary အဖြစ် Morikawa Aoi
Suzui Ryouta အဖြစ် Takasugi Mahiro
Kakegurui ရဲ့ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ – Hyakkaou ဟာ လူကုံထံသားသမီးတွေပဲတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့ private ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျောင်းမှာတက်ရောက်ကြသူတွေဟာ စာတော်စရာမလိုပါဘူး၊ အားကစားမှာထူးချွန်စရာမလိုပါဘူး၊ လိုအပ်ချက်ကတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်၊ အဲဒါကတော့ လောင်းကစားလုပ်တာတော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျောင်းမှာ အရာရာတိုင်းကို လောင်းကစားလုပ်ပြီးပဲ ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ Hyakkaou Academy ဟာ လောင်းကစားထူးချွန်သူတွေက ဘုရင်လိုနေပြီး ညံ့တဲ့သူတွေက ကျွန်တွေလိုနေရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ Jabami Yumeko ဟာ Real Gambling ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို တစ်ကျောင်းလုံးကိုသင်ခန်းစာပေးဖို့ ဒီကျောင်းတော်ကြီးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
Kakegurui live action ကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ကစပြီး ထုတ်လွင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
＼さァ、賭け狂いましょう！?／#浜辺美波 さん、#高杉真宙 さん、#森川葵 さんから、コメント映像が到着?⚡
— ドラマ「賭ケグルイ」 (@kakegurui_jp) December 22, 2017
Drama, Japan, Mystery & Suspense
2017 မှာ Golden Globes ဆုကို မျှော်လင့်ထားတဲ့ The Greatest Showman
2017 အတွက် Musical drama ဇာတ်ကားအဖြစ် ဝင်ရောက်လာတော့မယ့် ရုပ်ရှင်ကတော့ The Greatest Showman ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ 75th Golden Globes Award ရဲ့ ဆန်ကာတင်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီး Best Motion Picture – Musical or Comedy, Best Actor – Comedy or Musical (Jackman) and Best Original Song(“This is Me”) ဆိုတဲ့ ဆု ၃ဆုကို ရွေးချယ်ခံဖို့ စာရင်းထဲမှာလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးတဲ့ ဒါရိုက်တာကတော့ oscar ဆုရရှိထားသော La La Land ကိုရိုက်ကူးတဲ့ Damien Chazelle ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus ရဲ့ ပိုင်ရှင် P. T. Barnum ရဲ့ အကြောင်းကို ဇာတ်ကားတစ်ကားအဖြစ် Musical drama အနေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်သီချင်းတွေကိုတော့ Pasek and Paul ကရေးသားပေးထားတာဖြစ်ပြီး La La Land ဇာတ်ဝင်တေးလို အောင်မြင်ဖို့လည်း မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကိုလည်း 2017 ထဲမှာဘဲ ရုံတင်ပြသပေးမှာဖြစ်လို့ အားလုံးကတော့ La La Land လိုဘဲ မျက်ရည်ကျရအောင်ကောင်းအုံးမယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ရင်း စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်…..
Image Source : https://www.facebook.com/pg/GreatestShowman